Usuku My Pet » 7 Amaqiniso Ugly About Dating Modern
Dating bekulokhu kuyingxenye isiko osentshonalanga kusukela eside. Nokho, the dating of namuhla ngokuphongoza ayisafani ukuba ngesikhathi 60s, 70s, 80s ngisho 90.
The obhekwe the Internet kanye nalo ukuvela ukuphola website ngokuyinhloko obangela for lolu shintsho. Nakuba zikhona izinto eziningi ezenza yanamuhla day dating kangcono futhi more okuthakazelisayo (ukuphola online ngokuqinisekile omunye wabo), phambi demerits ngeke waphika futhi. Ngezansi kukhona amanye amaqiniso ugly ngezothando yanamuhla kuyokusiza ukuba simazi nalabo demerits.
1. Abantu ngicishe ngalukhohlwa ukukhuluma nomunye
Ukukhulumisana kungenye Easy esinye sezipho enkulu ubuchwepheshe uye wanikeza abantu. Namuhla, abantu uthando uthole yokuxhumana nomunye ngisho balé kude. Nokho, lokhu ekuqhubekiseleni technology uye wabulala ngenhloso abantu ukuba bakhulume.
Yebo, okufundile it right; Abantu abaningi namuhla Unganxaneli ukuzwa izwi othandekayo wabo, uchungechunge imiyalezo ukwenza umsebenzi wabo. Kuthiwani zezingcingo? Oh, ngoba iningi labo yizinto zesikhathi esidlulileko.
2. Nguwe, uma engenalwazi
Ufuna ukuthola othile osithandayo? Namuhla, indlela elula yokwenza lokho ngokuba abangenalwazi. Uzovela ukhange dating yakho umlingani, uma ukunakekela kancane. Kulezi zinsuku, cishe akekho ubonakala enesithakazelo kubantu ababonisa isithakazelo.
3. Basabele cishe njalo okukhohlisayo
Emagama ukusabela cishe akunakwenzeka kuze kufike abantu okuqondene isizukulwane samanje bakhathazekile. Umuntu nhlobo umxhwele nawe eziphatha ngendlela efanayo futhi has a look ofanayo yakhe / ubuso bakhe njengoba umuntu onesithakazelo ngempela kuwe. Abantu abaningi, namuhla, nisikhohlwé kanjani imizwa futhi becabanga ukuthi imfanelo enhle.
4. Imali, imali and imali bese kufika ukubukeka
Isitatimende ngenhla kuyiqiniso ikakhulukazi amadoda; kwabesifazane, kuyoba ngenye indlela round (ukubukeka kuza kuqala imali bese). Kafushane, ukuthi umuntu othandana naye ngeke abe nesithakazelo kuwe incike kuphi wena zibalwa kuze kufike lezi zici ezimbili bakhathazekile. Yebo, kuphela laba ababili; konke okunye kuza ngemuva kwalezi.
5. Izinto kakhulu ihlelwe ukuba romantic
Namuhla ukuhlela Hangout yothando iye sekulula khulu. You ukufona nabahlinzeki ngeke ukuhlela a dinner ikhandlela ukukhanya kwakho. Ngokuphawulekayo Lokhu liphelile the charm eyodwa esetshenziswa ukuzihlanganisa zinhlelo ekuqaleni.
6. Inqubomgomo? Yini privacy?
Akukho lutho ngasese mayelana nithandana namuhla. Wena yango umuntu ntambama kusihlwa uzobona izithombe amabili uchofoze ndawonye abezindaba omunye umuntu social akhawunti kulandelwa uchungechunge amazwana emabintana Creepy. Uma kungukuthi esetshenziswa kukho, awunandawo lesi sizukulwane.
7. Ukusho kuphelile kulula manje
Just a umbhalo kanye nomlingani wakho bayokwazi ukuthi abekho nesithakazelo ngokwengeziwe kuye / yakhe. Ngezinye izikhathi ematheksthi kokuhlukana aqukethe nje umbhangqwana noma amazwi. Ingabe breaking up ubuhlobo ngempela lula ukuthi?
Namuhla, ziye ngokuqinisekile abantu baphelelwa yisineke more and abayitoho; ukungabi isikhathi futhi idemoni enkulu. Nokho, akunakushiwo waphika ukuthi basafuna ukuba sithande futhi sithandwe. Ngakho, ngokushesha isikhathi zifike lapho dating iba njengoba romantic and ethokozisayo njengoba lisetshenziswe ukuba esedlule.
Ingabe Dating A Boyfriend Boomerang?